Tekisi yeramangwana iri chikamu chezvino (I): Cabify | IPhone nhau
Takatanga nhevedzano yandinofunga kuti ichave inonakidza kwazvo umo isu ticha tarisa kune makuru ekufambisa kwevatakuri mafomu ayo anoshandiswa pasi rese. Uye isu tichatanga neapp iyo iyo, pasina kuve iyo inoita ruzha rukuru, ine chinzvimbo chinowanikwa mu Spain neLatin America: Cabify.
Inozivikanwa kune zvese izvo Uber kuSpain yasangana nematambudziko akawanda kupfuura zvaitarisirwa nehutungamiriri, uye izvi zviri kunyangwe ichipa sevhisi yakajeka kupfuura iyo yetekisi muzvinhu zvese (data rinogona kutsigirwa nemunhu wese akamboshandisa ese masevhisi), kubva kuMasangano anotarisira tekisi zviri pamutemo akaomerera pakuedza kucheka mapapiro egoridhe reNorth America. Uber yakadzoka nemarezinesi eVTC kuMadrid, asi Cabify ndiyo chaiyo inoshanda imwe, inoshanda, uye iine hupo mune mamwe maguta kupfuura kambani yaTravis Kalanick.
2 Mamwe maguta
Kana paine chinhu chimwe chete chinokosheswa kana uchishandisa mutyairi wekufambisa, ndezvekuti zvese zvinokasira uye nyore. Cabify inoshanda zvakangofanana neUber kana Lyft: Inoona iko kwatakabva, tinopinda panzvimbo yekuenda, tinowana chiyero uye tinomirira mota kuti izotitora. Kubhadhara kunoitwa otomatiki kana uchipedzisa rwendo kungave nekadhi kana PayPal, chero zvatinoda.
Zvakanakira kupfuura tekisi zvinoita kunge zviri pachena, asi zvinowedzererwa patinoona kuti mune 9 kubva gumi kesi tichaenda nemotokari iri nani, kuti isu tinogona kusarudza pakati pemavhisi akasiyana zvichienderana nezvatinoda kana kuda kubhadhara, kuti mota ine tinted windows kutipa zvakavanzika kana kuti mutyairi wedu achange akapfeka sutu uye anotipa mvura yemamineral kuitira kuti tide hydrate. Zvese izvi pasina muripo, hongu.
Mukana mukuru weCabify zvine chekuita neUber kuSpain ndeyekuti iripo mumaguta akawanda senge Valencia, Barcelona kana Malaga, apo Uber nhasi inoshanda kuMadrid chete. Saizvozvo, kune dzimwe nyika muLatin America uko Cabify inoshanda nekubudirira kunozivikanwa, saka yave nyaya yekuti mumwe nemumwe asarudze kuti sevhisi yekushandisa zvinoenderana nepatiri.
Iko kune muyedzo usingadzivisike dhimoni dhisiki tekisi Iripo, asi ini handizove ini kuzviita. Ndatora matekisi mazhinji, uye ndakwira nemadhiraivha anoshamisa ematekisi, kunyangwe chiri chokwadi kuti huwandu hwenzendo dzinogutsa hwakadzikira zvakanyanya kupfuura hwemasevhisi akadai seCabify. Uye kana tichifunga nezvazvo, chokwadi ndechekuti tekisi yanga isingazive maitiro ekuenderana nemusika, yasvika nguva yadarika uye yakaedza kumisa kubuda kweropa kuburikidza nezvakadawa uye nezvinodiwa pahutongi. Asi kufambira mberi hakumiswe uye ramangwana ndereUber, Lyft kana Cabify.
Cabify zviri pachena inoda kurodha pasi app uye kunyoresa - unogona kuzviita zvese kubva pano izvo zvinosanganisira € 6 chipo cherwendo-. Kana iwe uchida kudhawunirodha iyo app uye kunyoresa pasina chipo chechikwereti, iwe unogona zvakare kuzviita pasina dambudziko pano.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Tekisi yeramangwana iri chikamu chezvino (I): Cabify
Chii chakakupihwa naCabify chekuisa ichi chinyorwa icho chekutanga hachipe chero ruzivo runobatsira uye chechipiri kushambadzira "kwemahara" zvachose?
Iwe unogona kutove wakaisa zvivakwa zvekushambadzira iwo mareti emahofisi ematekisi, ayo anodhura uye anobhadhara akasiyana mutero. Kunze kwekuve nevakuru, matekisi ekumusoro-soro asingabhadharise kupfuura mamwe emamwe tekisi, iwe unokarakadza kuti tekisi tekisi yazvino neyenguva yemberi, kana paine mafuratifomu akati wandei ekufamba.
Kukurudzira mari nhema ... zvakanaka! Rangarira cabify uye uber kana iwe uine tsaona uye inishuwarenzi haikufukidze, kana kana iwe uchienda pamudyandigere uye pasina mari yekubhadhara pension yako
Pd: chii chawakabhadharwa kushambadza uku?
Ini ndinogara mune rimwe guta muLatin America uko iyi imwe nzira iri kutariswa sebasa rakakura. Rangarira kuti hunyanzvi hwevatyairi vematekisi echinyakare handiyo yakanyanya kunaka. Neiyi APP tinogona kuona kudzidziswa kwemutyairi uye mhando uye nyaradzo mumotokari. Pamusoro pekugadzirisa kumatunhu emunharaunda, kunyaradzwa uye chengetedzo zvinokunda munzvimbo idzi.
Akayambira kuti ini handina kubhadharwa nekuda kwecomment, ndinonyora icho chiri chokwadi chiri nyore chekusimudzira dzimwe nzira iwe wakadii.